Sidee ayuu Maxamed Bin Salman u burburiyey shirkadii awooda badneyd ee qoyska Sheekh Osama Bin Laden | Biyoguurenews.com
Home Wararka Sidee ayuu Maxamed Bin Salman u burburiyey shirkadii awooda badneyd ee qoyska...
Sidee ayuu Maxamed Bin Salman u burburiyey shirkadii awooda badneyd ee qoyska Sheekh Osama Bin Laden
Kaddib markii Mohammed bin Salman uu noqday qofka labaad ee ugu awoodda qasriga boqortooyada Sacuudi Careebiya, waxa uu diiradda saaray sidii uu u burburin lahaa qoyska caanka ah Bin Laden.
2015-kii, xlligaas oo uu ahaa 29 jir, Maxamed Bin Salman waxa uu ku dhawaaday Bakr bin Laden, oo ah gudoomiyaha shirkadda weyn ee dhismaha ee Bin Laden Group, waxa uu u sheegay sida laga xiganayo lix qofood oo waxa dhexmaray loo sheegay, in uu ka dalbaday in uu doonayo in la shiraakoobo shirkadda.
Amiirka waxa uu dalabkiisa u arkayey mid wadanninimo taas oo uu uga caawinayo shirkadda si ay uga gudubto dhibaatada dhaqaale.
Bakr bin Laden, maadama uu yahay madaxa shirkadda dhismaha ee ay qoyska uu ka dhashay Osama Bin Laden, islamarkaana boqortooyada ka heli jiray qandaraasyo, waxa uu u nuglaa codsiyada boqortooyada. Laakiin waxa uu markan diiday dalabkii Amiirka, wuxuuna dalbaday waqti uu kula tashado saamileyda kale ee qoyska.
Bilihii ku xigay, Amiir Mohammed bin Salman, oo ay dadka inta badan u garan ogyihiin MBS, awooddiisa wey sii korotay. Dhinaca kale shirkadda Bin Laden, waxa ku yimi hoos u dhac awoodeed oo aad u hooseeya.
Markii uu xukunka qabsaday Bin Salman, mid ka mid ah tallaabooyinka dowladda qaaday 2015 waxa ay ahayd in dib u eegis lagu sameeyo qandaraasyada dowladda, iyada oo diiradda la saarayo mashaariicda waa weyn kuwaas oo ay ku tiirsanaayeen kooxda Bin Laden.
September 2015, maalmo kahor xilligii gudashada Xajka wiish dhisme oo ay leeyihiin kooxda Bin Laden, oo ku dhacay Masjidka weyn ee Makka ayaa sababay dhimashada 107 ruux. Dowladda waxa ay tallaabo ka qaaday shirkadda, iyada oo ka mamnuucday qandaraasyadii ay heli jireen halka ay xannibaad safar ku soo rogtay madaxda sar sare ee shirkadda. Sidoo kale waxa ay dowladda Wasaaradda Maaliyadda ku amartay in ay dib u eegis ku sameyso maashaaricda ay hadda haystaan, iyaga oo u aaneeyey tayo xumadooda.
Mas’uul sare oo ka tirsan shirkadda Bin Laden iyo Ilo wareed ka ag dhaw qoyska ayaa sheegay in shilkaas uu dowladda siiyey albaabkii ay shirkadda ka soo geli lahaayeen.
Markii la waayey lacagtii ay ka heli jireen dowladda, dhaqaalaha shirkadda Bin Laden hoos u dhac ayaa ku yimi, waxa ayna joojiyeen mushaaraadkii ay siin jireen tobanaan kun oo shaqaaleheeda ah taas oo horseeday rabshado. Bartamihii 2016 waxaa inta badan joogsaday shaqadiii dhisme ee shirkadda Bin Laden oo ay ku jiraan dhismeyaal aas aasi u ahaa qorshaha is bedel ee Maxamed Bin Salman.
Habeenkii ay bisha November ahayd 4, 2017, mas’uuliyiinta Sucuudiga wax ay xireen Bakr bin Laden iyo 200 oo ka mid ah madaxda waa weyn ee boqortooyada Sacuudiga, waa tallaabo ay ugu yeeraan mas’uuliyiinta in ay kula dirirayaan mausuq maasuqa. Sidoo kale, Daraasiin ka mid ah qoyska Bin Laden oo ay ku jiraan carruurta ay dhaleen walaalahood waxaa laga xannibay akoonnadoodii iyo safaradda dibedda.
Bakr waxa u bilowday xarig soconayey muddo ka badan 10 bilood. Sida kuwo badan oo kale waxaa lagu hayey Hotel-ka Rits-Carlton ee ku yaal Riyaad. Sidaas oo kale waxaa lagu hayey walaalahiis Saleh iyo Saad kuwaas oo saamiley waa weyn shirkadda ka ah. Walaalaha kale ee Bin Laden – Omar, Ahmed, Mohamed Abdullah iyo Yahya waxaa muddo yar iyagana lagu hayey Hotel-ka, sida laga soo xiganayo afar qof oo xiriir la leh qoyska.
23kii April, dowladda oo soo mareysa shirkadda Istidama Holding Company waxa a la wareegtay 36.2% saamiga shirkadda Bin Laden, iyada oo ka faa’iideysaneysa dhibaaooyinkii garay. Waxa ay taas ka dhigneyd intii ay saamiga u lahaayeen Bakr iyo Saleh, sidaas waxaa laga soo xiganayaa dikuminti ay heshay Reuters oo ka timi Wasaaradda Ganacsiga.
Mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan dowladda ayaa u xaqiijiyey Reuters in Wasaaradda Maaliyadd ay leedahay Istidama. Si Shaaric ah looma yaqaan shirkadda maadama aysan ahayn mid diiwaan gashan, Reuters wey ku adkaatay in ay xiriir la sameyso shirkadda.
Dowladda waxa ay sameysy guddi shan nin ka kooban oo la socday sida shirkadda Bin Laden loo maamulo. Xubnaha waxaa ka mid ah Abdulrehman al-Harkan,oo hore u ahaa madaxii fulinta ee shirkadda horumarinta Dar Al Arkan ee fadhigeedu yahay Riyaad; Khaled Nahas, oo ah xubin ka mid ah petrochemical producer Saudi Basic Industries Corp; iyo Khalid al-Khowaiter, madaxa maaliyadda ee at Advanced Electronics Company, shirkad Teknooloji oo ay sameysay dowladda. Dadkan ay dowladda magacowday ayey dad badan u arkaan in ay maamulidda shirkdda loolan ugu jiraan. “Gundhigga waxa weeye in dowladdu la wareegtay,” waaa sidaas yiri qof Jidda jooga.
Saddex meelood labada meel shirkaddda Bin Laden ka soo hartay waxaa wali haysta 15 da’yar ah oo la dhashay walaaha Bin Laden, sida laga soo xigaayo dikuminti ay leedahay Wasaaradda Ganacsiga. Laba qof oo ka tirsan qoyska Bin Laden ayaa lagu daray gudiga shanta ah ee kor joogteenaya habka shirkadda loo maamulayo, Yaha kaas oo jooga xafiiska dame iyo Abdullah, abukaate wax ku soo bartay Jaamacadda Harvard kaas oo gacanta ku haya danaha shirkadda ee Mareykanka.
Sidaas darteed shirkadda Bin Laden Group ayaa ayada oo hadda aad u liidata, waxaa qeyb ka mid ah yeeshay Maxamed Bin Salman.
Previous articleSafiiradda Dalalka Denmarka Iyo Holland Oo Ku Baaqay In Deg Deg La Isugu Keeno Madaxda Somaliland Iyo Soomaaliya.
Next articleDAAWO:-Xisbiyadda Mucaaradka Oo Shaaciyay In Kulamadii Xukuumadda U Socday Uu Fashilmay+Doorashooyinka Oo Dib U Dhacaya